पाइन्टको पछाडिको खल्तीमा पर्स राखेर बस्नु खतरनाक ! - NA MediaNA Mediaपाइन्टको पछाडिको खल्तीमा पर्स राखेर बस्नु खतरनाक ! - NA Media
नम्बर २ः सुरुमा मेरुदण्ड अस्थायी रूपमा बांगिन्छ । त्यसपछि स्थायी रूपमा बांगिन्छ । यो अवस्थालाई ‘स्कोलियोसिस’ भनिन्छ । यो समस्या १४–२० वर्षको उमेर समूहलाई बढि हुनेगरेको मैले देखेको छु । यस्ले पनि ठिक हुनै गाह्रो हुने खालको दुखाई निम्तिन सक्दछ । यो कुरा तलको चित्रमा देखाइएको छ ।